ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှဝေသူများ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / အကွောငျး / ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှဝေသူများ
ခမညျးတျော Sean Francis က
ခမညျးတျော Sean နောက်ကွယ်ကစွမ်းအင်နှင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ 2fish.co နဲ့ content ၏အဓိကပံ့ပိုးသည်.
web ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းအားကိစ္စရပ်များကိုရှင်းလင်းအားမိမိအလိုဆန္ဒ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနောက်ကွယ်မှအဓိကအင်အားစုခဲ့သည်. သူသည်လက်ရှိတွင်အနောက်နိုင်ငံများတောင်တန်းများအတွင်းကက်သလစ်လူနာနှင့်ဝန်ထမ်းများမှခရစ်ယန်ဂိုဏ်းသင်းအုပ်အဖြစ်အမှုဆောင်ဖြစ်ပါတယ် (ရှိကြောင်း Pittsburgh) ဧရိယာသူနာပြုနေအိမ်များနှင့်မွန်းမြို့နယ်စိန့်မာရိကမာဂရက်မှာ, PA ဆိုပြီး. fr. Sean လည်း Glenshaw အတွက်စိန့် Bonaventure ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်မှာယခင်ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နှင့်ပတ်သက်သော Vicar ဖြစ်ပါသည်, PA ဆိုပြီး; နယူးရဲတိုက်အတွက်စိန့် Vitus ခရစ်ယာန်အသင်းတော်နယ်ပယ်, PA ဆိုပြီး; Wexford နှင့်စိန့် Alphonsus, PA ဆိုပြီး.
တစ်ဦးကဟောင်းများပန်းမန်လုပ်ငန်း, ခမညျးတျော Sean, Pittsburg ၏ Diocese အားဖြင့်စီရင်ခဲ့သည်. သူဟာရောဘတ်မောရစ် University မှမာစတာစိန့်ဗင်းဆင့် College မှဘုရားအတွက်ဒီဂရီနှင့်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဘွဲ့ရဲ့ဒီဂရီရှိပါတယ်.
သူ၏အကျိုးစီးပွားကို softball ပါဝင်; အခြားအားကစား; ငါးဖမ်း; နဲ့သူ့မိသားစု.
အန်ဒီတီထွင်, စီစဉ်, designed and hosts 2fish.co. ဖြည့်စွက်ကာ, he has contributed content and images and serves as an editor.
သူ၏ CEO ဖြစ်သူသည် ငါအန္တရာယ် Associates မှမျှော်လင့်ပါတယ်.
တစ်ဦးကိုယခင်ကတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ, သူဂျီ-Mellon တက္ကသိုလ်ကနေဒေါက်တာဘွဲ့ရှိပါတယ်, ရှိကြောင်း Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှ MBA ဘွဲ့, နှင့်စီးပွားရေးအတွက် BSBA.
အန်ဒီရဲ့အကြိုးစီးပှားကိုသူ့မိသားစုကိုပါဝင်, မိမိအခွေး, အားကစား, နှင့်လေ့ကျင့်ခန်း.
Lucy များအတွက်နေ့စဉ်ဖတ်ကြားရေးသား 2fish.co, အလိုအလျှောက်အီးမေးလ်များကိုကူးပြောင်းနှင့်မေးလ်စာရင်းအပေါ်သူတို့အားစေလွှတ်သော.
သူမသည်ကက်သလစ်အထက်တန်းကျောင်းသို့တက်ရောက်, သူမပညာရှင်တွေအတွက်ထက်မြတ်နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်တိုင်းပြည်ပြေးဘယ်မှာ, မိုးလုံလေလုံလမ်းကြောင်း, နှင့်ပြင်ပတွင်လမ်းကြောင်း.
Lucy ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပြေးပါဝင်, လေ့ကျင့်ခန်း, စျေးဝယ်, သူမ၏ခွေး, နှင့်ခရီးသွား.
ဒီဇင်ဘာလ 19, 2018
ဒီဇင်ဘာလ 18, 2018
ဒီဇင်ဘာလ 17, 2018
ဒီဇင်ဘာလ 16, 2018
ဒီဇင်ဘာလ 15, 2018